भ्रष्टाचार बिरुद्धको अभियानमा जनताको राम्रो साथ देखियो ! - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
भ्रष्टाचार बिरुद्धको अभियानमा जनताको राम्रो साथ देखियो !
साझा विवेकशील पार्टीले भर्खरै सुदुरपश्चिम प्रदेशमा भ्रष्टाचार बिरुद्धको अभियान सम्पन गरेको छ । अभियानमा नागरिकहरुको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ । अभियानमा सहभागि भएका युवा अभियन्ता तथा साझा सद्भाव समुह भारतका सम्पर्क प्रमुख गंगाप्रसाद भट्टराई संग अभियनका सन्दर्भमा गरिएको कुराकानी प्रस्तुत छ :
सुदुरपश्चिम यात्रा कस्तो रह्यो ?
– सुदुरपश्चिम आफैमा एउटा सुन्दुर प्रदेश हो । प्रदेशका बिभिन्न जिल्लाहरु पुग्ने सुनौलो अबसर पाए । नागरिकहरुसंग भेटघाट पनि गर्ने मौका पाए । बर्षौपछि गाउँ–गाउँ पुग्दा निकै उत्साह देखियो । युवा पुस्ताहरुको परिवर्तनकारी सोच नै मेरा लागि सुदुरपश्चिम यात्राको राम्रो ज्ञान भयो ।
भ्रष्टाचार बिरुद्धको अभियानमा नागरिकको सहभागिता कस्तो देखियो ?
– पछिल्लो चरणमा सरकार प्रति जनताको निरासा बढिरहेको छ । सरकारले जनताका दैनिकीमा कुनै फरकपना ल्याउन सकेन । हामीले दुईतिहाइको सरकार भन्दै जति झ्याली पिटेपनि सरकारबाट कुनैपनि हालतमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुनेमा जनताको अपेक्षा देखिदैन । कारण ः सुन काण्ड, फोरजी काण्ड, वाइड वडी काण्ड, प्रधानमन्त्री ओलीकै गोजी मान्छे संलग्ना रहेको बालुवाटार जग्गा काण्ड, आयल निगम काण्ड लगायत यस्ता तमाम काण्डहरु भ्रष्टाचार भएका काण्डहरु हुन् । यी काण्डहरुमा सरकारकै मान्छेहरु समेत परेका छन् । खै त सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रयास गरेको ? सरकार त भ्रष्टाचार अन्त्य गरौं भन्दा सुन्दैन, त्यसकारपनि यो हाम्रो पार्टीले चलाएको अभियानमा जनताको राम्रो साथ देखियो । जनतामा जागरण देखिएको छ । उहाँहरुमा नयाँ बिकल्प, नयाँ इच्चाशक्ति भएको नेतृत्वको आबश्यकता देखिएको छ । यसकारण पनि हाम्रो अभियान प्रति जनताको राम्रो सहभागिता देखियो ।
भ्रष्टाचार कसरी अन्त्य गर्ने ?
– महत्वपुर्ण बिषयको उठान गर्नुभयो । भ्रष्टाचार मान्छेले नै गर्ने हो ? यो प्रकृतिक कुरा त पक्कैपनि होइन । सबैभन्दा पहिले त हरेक नागरिकमा सकारात्मक सोचको बिकास गर्न जरुरी छ । जो अहिले हाम्रो पार्टीले समाजमा गरिरहेको छ । जनताले नै प्रतिनिधिहरुका दैनिक काम कतब्र्यमा प्रश्न नगरेसम्म भ्रष्टाचार अन्त्य सम्भब छैन । देशको राजनीति पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रिय भूमिका रहन्छ । मुलुकको बागडोर संचालन गर्ने नेता र उच्च पदस्त प्रशासकहरु सदाचारी भए भने देशबाट भ्रष्टाचार स्वतः भाग्दछ । यहाँ त जो रक्षक उही भक्षक भएर मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा गाडिएको छ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नु त कताकता संरक्षण दिने नेताहरुको प्रवृति छ । सामाजिक फजूल खर्च नियन्त्रण हुर्नुपर्छ । भौतिक होइन आध्यात्मिक प्रतिस्पर्धा बढाउनु पर्छ । जनतालाई परावलम्बि होइन स्वावलम्बि र अनुशासित बनाउनु पर्छ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही र सदाचारीलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ ।
अन्य पार्टी र तपाईहरुको पार्टीमा के फरक छ ?
– पुराना पार्टीहरु भन्दा हामी निकै फरक छौं । हामी जनताका लागि राजनीति गर्छौ । पुराना पार्टीहरु आफ्नो जीवन बनाउनका लागि राजनीति गरिरहेका छन् । हामी सुशासन चाहान्छौं, उहाँहरु यो पटकै सुन्न सक्नुहुन्न । जस्तै कि, हामी भ्रष्टाचारको ठुलै बिरोधी हौं, हाम्रो पार्टीले भ्रष्ट सहदैन । हेर्नुहोस् पुराना पार्टीहरुको बाटो भ्रष्टाचारको वरिपरि नै घुमिरहेको छ । हामीहरु बेला–बेला भन्ने पनि गर्छौं । हामी नष्ट हुन्छौं तर भ्रष्ट हुदैनौं ः मैले भन्न खोजेको के हो भने ः हामी गलत बाटोमा कुनैपनि हालतमा हिड्ने छैनौ । हामी जनताका लागि, जनतासंग हुन्छौं । अर्को कुरा हाम्रो वरिपरि देखिरहेका यी पुराना पार्टीहरुको उदय हिंसात्मक आन्दोलनबाट भएको हो । हिंसात्मक आन्दोलन क्षणीक हुन्छ । हामी यात्रा शान्तिपूर्ण रुपमै सुरु भएको छ ।
प्रवासी राजनीतिमा साझा विवेकशील पार्टीको अबस्था कस्तो छ ?
प्रवासमा पार्टीले, साझा सद्भाब समुह बनाएको छ । देश बाहिरपनि युवा पुस्ताहरुको राम्रो उपस्थित देखिएको छ । देशको पछिल्लो राजनीति प्रति युवा पुस्ताहरुले निकै चासो देखाउनु भएको छ । उहाँहरु बैकल्पिक राजनीतिमा निकै आर्कषित हुनुहुन्छ । सद्भाव समुहले नेपाल फर्कौ भन्ने अभियान पनि सुरु गरेको छ । विदेशमा पनि संगठन निमार्णको कामले तिब्रता पाइरहेको छन् ।
भारतमा संगठन निमार्णको काम कस्तो भैरहेको छ ?
– लोककल्याणकारी राज्य लगायतका तमाम महत्वपुर्ण कार्यक्रमका साथ साझा विवेकशील पार्टीले जनता जागरणका लागि गाउँ–गाउँमा पुगिरहेको छ । अब हामीहरु पनि भारत प्रवासका लागि संगठन निमार्णको काम लगतै हामीहरु पनि युवा जागरणको कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छौं ।
साझा विवेकशील पार्टीमा किन लाग्ने ?
देशको परिवर्तन गर्न । नेपाली समाजलाई बिकसित, शैक्षिक जागरण र भ्रष्टाचार मुक्त गरेर सभ्य समाज निमार्ण गर्न लगायत धेरै, देशको मुहर नै बदल्नु छ नि ।
– युबा पुस्ता नजाग्ने हो भने परिर्वतन सम्भब छैन । सबै युबाहरु एकजुठ भएर साझाा विवेकशी पार्टीको राष्ट्र निमार्ण गर्ने अभियान जुटौं, अन्त्यमा नेपालको जय होस् ।